I-Huawei S5700 Series Ijija Abavelisi | Kwichina Huawei S5700 Series Ijija Factory & abaXhasi
S5720-SI Series Ijija
Ukutshintshwa kwe-Gigabit Ethernet eguqukayo ebonelela ngohlaziyo, uxinizelelo oluphezulu lokutshintsha kwamaziko edatha. Iimpawu zibandakanya ii-terminals ezininzi, ukubekwa kweliso kwevidiyo ye-HD, kunye nokusetyenziswa kwengqungquthela yevidiyo. Ukuqokelelwa kwe-iStack okrelekrele, i-10 Gbit / s amazibuko anyukayo kunye nokuhanjiswa kwe-IPv6 kwenza ukusetyenziswa njengokutshintsha komdibaniso kwinethiwekhi zekhampasi yeshishini.
Ukuthembeka kwesizukulwana esilandelayo, ukhuseleko, kunye neetekhnoloji zokonga umbane zenza i-S5720-SI Series Switches kube lula ukuyifaka nokuyigcina, kunye nomthombo ogqwesileyo wexabiso eliphantsi lobunini (TCO).
S5720-LI Series Ijija
Uchungechunge lwe-S5720-LI lusindisa ugcino lwamandla e-gigabit Ethernet ezibonelela ngokungena kumazibuko okufikelela kwe-GE kunye namazibuko e-10 GE uplink.
Ukwakha kwizixhobo zokusebenza ezikumgangatho ophezulu, imo yokugcina kunye nokudlulisela phambili, kunye neQonga leHuawei eliguqukayo (i-VRP), uthotho lwe-S5720-LI luxhasa iStack ekrelekrele (iStack), inethiwekhi ye-Ethernet eguqukayo, kunye nolawulo lokhuselo olwahlukeneyo. Banikezela abathengi ngohlaza, ekulula ukulawulwa, ekulula-ukwandisa, kunye ne-gigabit enexabiso eliphantsi kwizisombululo zedesktop.
I-Huawei s5720-hi yokutshintsha uthotho
Uthotho lweHuawei S5720-EI lubonelela ngokufikeleleka konke ukufikelela kwigigabit kunye nokuphuculwa kwe-10 GE uplink port scalability. Zisetyenziswa ngokubanzi njengokungena / ukuhlanganiswa kokutshintsha kuthungelwano lweekhampasi zeshishini okanye ukutshintshela ukufikelela kwigigabit kumaziko edatha.
S5720-EI Series Ijija
I-Huawei s5700-si series itshintshela
Uchungechunge lwe-S5700-SI luyi-gigabit Layer 3 Ethernet switch esekwe kwisizukulwane esitsha sehardware yokusebenza okuphezulu kunye neQonga leNdlela yeHuawei eHambeneyo (VRP). Inika amandla amakhulu okutshintsha, i-GE interfaces ephezulu, kunye ne-10GE uplink interfaces. Ngeempawu zenkonzo ebanzi kunye ne-IPv6 yokudlulisa amandla, i-S5700-SI isebenza kwiimeko ezahlukeneyo. Umzekelo, inokusetyenziswa njengofikelelo okanye utshintsho kumdibaniso wekhampasi yenethiwekhi okanye ukutshintshela ukufikelela kumaziko edatha. I-S5700-SI idibanisa iitekhnoloji ezininzi eziphambili ngokuthembela, ukhuseleko kunye nokugcina amandla. Isebenzisa iindlela ezilula nezifanelekileyo zokufaka kunye nokugcina ukunciphisa iindleko ze-OAM zabathengi kunye nokunceda abathengi beshishini ukuba bakhe inethiwekhi ye-IT elandelayo.
I-HUAWEI S5700-LI Ijija
I-S5700-LI sisiginjana esilandelayo sokugcina umbane se-gigabit Ethernet esibonelela ngamazibuko afikelelekayo e-GE kunye namazibuko e-10GE e-uplink. Ukwakha kwisizukulwana esilandelayo, ukusebenza kwehardware ephezulu kunye neQonga leHuawei eVumelanayo (i-VRP), i-S5700-LI ixhasa uLawulo oluPhezulu lweHibernation (AHM), isitaki esikrelekrele (iStack), inethiwekhi ye-Ethernet eguqukayo, kunye nolawulo olwahlukeneyo lokhuseleko. Inika abathengi ngohlaza, ukuphatha ngokulula, ukwandiswa ngokulula, kunye ne-gigabit enexabiso eliphantsi kwisisombululo sedesktop. Ukongeza, iHuawei ilungiselela iimodeli ezizodwa ukuhlangabezana neemfuno zabathengi ukuze zilungele iimeko ezithile.
Uthotho lweHuawei S5700-HI ziigigabit Ethernet switch ezihamba phambili zibonelela ngokufikelela gigabit kunye 10G / 40G uplink port. Ukusebenzisa isizukulwana esilandelayo, ukusebenza kwehardware ephezulu kunye neQonga leHuawei eliguqukayo (i-VRP), i-S5700-HI series switch switch zibonelela ngocazululo oluhle kakhulu lwenethiwekhi ye-NetStream, inethiwekhi eguquguqukayo ye-Ethernet, ubuchwephesha obuninzi betekhnoloji ye-VPN, iindlela ezahlukeneyo zolawulo lokhuseleko, amanqaku avuthiweyo e-IPv6, kunye nolawulo olulula kunye ne-O & M. Zonke ezi zinto zenza i-S5700-HI uthotho lokufikelela kumaziko edatha kunye nenethiwekhi enkulu kunye naphakathi kunye nekhampasi kunye nokudityaniswa kwenethiwekhi encinci zekhampasi.
I-Huawei s5700-ei switch switch
Iswitshi yeshishini ye-S5700-EI yokutshintsha kweshishini (S5700-EI) zizitshintshi zokugcina ugcino lwamandla ezenziwa nguHuawei ukuhlangabezana nemfuno yokufikelela kububanzi bebhendi kunye nokudityaniswa kweenkonzo ezininzi ze-Ethernet. Ngokusekwe kwi-Hardware-edge-edge kunye ne-Huawei Versatile Routing Platform (VRP) yesoftware, i-S5700-EI ibonelela ngesixhobo esikhulu sokutshintsha kunye nezibuko eziphezulu ze-GE ukumilisela ukuhanjiswa okungaphezulu kwe-10 Gbit / s. I-S5700-EI isetyenziselwa iimeko ezahlukeneyo zenethiwekhi yamashishini. Umzekelo, inokusebenza njengokufikelela okanye ukutshintshela ukuhlanganiswa kuthungelwano lwekhampasi, iswitshi sokufikelela kwi-gigabit kwiziko ledatha ye-Intanethi (i-IDC), okanye iswitshi yedesktop yokubonelela nge-1000 Mbit / s ukufikelela kwiitheminali. I-S5700-EI kulula ukuyifaka nokuyigcina, ukunciphisa umthwalo womsebenzi kucwangciso lwenethiwekhi, ulwakhiwo kunye nolondolozo. I-S5700-EI isebenzisa ukuthembeka okuphezulu, ukhuseleko, kunye neetekhnoloji yolondolozo lwamandla, ukunceda abathengi beshishini ukuba bakhe
Inethiwekhi elandelayo ye-IT.
Qaphela: I-S5700-EI ekhankanywe kolu xwebhu ibhekisa kuthotho lonke lwe-S5700-EI kubandakanya i-S5710-EI, kunye neenkcazo malunga ne-S5710-EI ziimpawu ezizodwa ze-S5710-EI.
Imodyuli yeFiber Optical, Ukudluliselwa kweModyuli yangaphandle, Ixabiso leHuawei Olt, IHuawei Qsfp +, Umthumeli weXfp, I-Sfp C ++,